Koreen mootummaafi ABO jidduutti araara buusuuf hundaa'e waraana dhaabuu labse - BBC News Afaan Oromoo
Koreen teknikaa araara mootummaafi ABO raawwachuuf hundaa'e har'a Amajjii 16 irraa eegale lolli gama lamaaniinuu akka dhaabatu labse.
Koreen guyyaa har'aa marii isaa magaalaa Ambootti taasisaa jiru karoora, yeroo itti raawwatu akkasumas murtii garaa garaa dabarseera.
Olollii miidiyaa gama lachuunu akka dhaabbatu, komiillee yoo qabaatan miidiyaaf ibsa kennuu hin danda'an.
Komii yoo qabaatan koree hundaa'e qofaaf gabaasuu qabu.
Yeroo waraanni seenu simannaan ho'aa akka taasifamuuf
Dhimma qabinsa waraanaa koreen teknikaa yeroo yeroon dhaqee akka hordofu.
Kaampii keessa ji'a lamaa ol akka hin turrellee murtaa'eera.
WBO'n erga galee booda humna mootummaan ala qaamni hidhatee Oromiyaa keessatti socho'u beekkamtii hin qabaatu.
Leenjiiwwan barbaachisaa ogeeyyii seeraa fi dhimma nageenyaan ni kennama.
Miseensootni WBO fedhii qaban dhuunfaa humna nageenyaatti akka makaman. Kanneen dhuunfaadhaan hojjetaniif immoo mootummaan deeggarsa barbaachisu ni taasisa.
Badii miseensootni WBO wayita waraanarra turan akka dhuunfaattis ta'e gareen raawwatan maraaf dhiifamni ni godhama.
Marii araaraa har'aa irratti sangaan araaraa kan qalame yoo ta'u qaamoleen lamaan tiruu waliin nyaataniiru.
Walitti Qabaan Gumii Abbootii Gadaa fi Abbaan Gadaa Tuulamaa duraanii Bayyanaa Sambatuu ''araarri kun kan xumuraati, kormas qalanneerra,'' jedhaniiru.
Miseensa koree araaraa kan ta'an Obbo Haayilee Gabree ''Rasaasni qabsoo Elemoo Qilxuu ykn immoo Taaddasaa Birruun dhuka'e har'a dhaabata. Kana booda Oromoon bilisummaadhaaf jedhee qawwee hin dhukaasu,'' jedhaniiru.
Obbo Hayileen Konfaransii Nageenyaa dheengadda Finfinneetti taa'a'amerratti, dubbiinsaanii "Araara kana milkeessuuf korma qaluun yoo barbaachise binnee qalla; nama qaluun yoo barbaachisemmoo anaan qalaa dhiiga kiyyaan araara buusaa,'' jedhu namoota hedduu biratti dubbii ijoo taheera.
Dura taa'aa Itti aanaan KFO Obbo Baqqalaa Garbaan immoo ''labsiin kuni labsii dhumaati. Labsii kana qaamni hin fudhadhu jedhu Ormiyaa keessa jiraachuu hin danda'u,'' jedhan.
Mootummaa bakka bu'ani kan dubbatan Obbo Moogas Ida'e, ''Murtee koreen kuni dabarse mootummaan ni fudhata. Silaa guyyaan kuni nu gabaabbate feena. WBO boru ganama simachuuf qophiidha,'' jechuun dubbatan.
Pirezidantiin Yunivarsiitii Amboo Dr Taaddasa Qana'aa, ''dhaabni kamiyyuu yoo dogongora uume kan miidhamu ummata waan ta'ef nagaa ummataatif hojechuu qabna. Dogongora wal irratti lakkaa'uu hin qabnu,'' jechuun dubbataniiru.
Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii irraa biyyatti deebii'an maal himuu?
Yeroo dhuma kan haaromfame: 3 Amajjii 2019